Chii Plastic jekiseni Kuumbwa? Plastic jekiseni Kuumbwa ndiye nzira inoshandiswa kuumba mapurasitiki ari muchimiro chinhu chauri aiming kubereka. Panguva jekiseni Kuumbwa kwacho, thermoplastic Polymers vari jekiseni kuva Foroma mhango. Kuti aite izvi, pellets ane zvinhu vanotsamwira saka ...Read more »
Chii The CNC machine Brass Parts? Brass machine zvikamu vane akawanda anokosha zvakanakira zvichienzaniswa machine zvimwe zvinhu. Brass akatendeuka mativi uye zvinoriumba vari rakasimba, mutengo-basa, uye kunyange kusika chisimbiso tighter kuti Fittings. Uyezve, nendarira machine uye vanoshandura zvikamu vane mukuru ...Read more »
Progressive Stampings Progressive tsikwa inzira rwekushanda nesimbi kuti anogona Ndigopoteredza punching, coining, vakafugama uye nedzimwe nzira akawanda kunatsiridza simbi mbishi zvinhu, pamwe ane zvaitika dzokudya hurongwa. Zvokudya Hurongwa achisunda kanyika nesimbi (sezvazvakanyorwa unrolls kubva coils) kuburikidza zvose ...Read more »
Sei uye apo kushandisa epurasitiki jekiseni anoumba A mapurasitiki jekiseni muforoma ndine mudziyo wakaita rose kana chikamu mapurasitiki zvinhu (dzakakudzingai maindasitiri thermosetting laminates), uye umo mapurasitiki chinowedzera substantially kuti utility yacho chokushandisa. munowanika vanosanganisira yose nzira kubva thos ...Read more »